WhatsApp fi Telegram: Kamtu irra filatama? - Barataa Technologies - Giddu Gala barnootaa fi Odeeffannoo
WhatsApp fi Telegram: Kamtu irra filatama?
By Alifu Haji	Creativity, Technology January 19, 2019
Telegram fi WhatsApp: Kamtu irra filatama?
Hunda keenyaaf WhatsApp fi Telegram maal akka tahan ibsuun barbaacisaadha natti hin fakkaatu. Maaliif yoo jenne bilbila hunda keenyaa irratti ni argamu waan taheef. Maxxansa kana keessatti garaagarummaan jara lamaanii maal akka tahe qabiyyee fi tajaajiloota isaan kennan irratti hundaa’uudhaan ilaalla.
Qabiiyyewwan WhatsApp fi Telegram
WhatsAppn hanga ammaatti itti fayyadamtoota biliyoona 1.7 ol kan qabu yoo tahu, telegram immoo itti fayyadamtoota miliyoona 200 ol kan qabuudha. Kana jechuun nuusa itti fayyadamtoota WhatsApp jechuudha. Akkuma Facebookn WhatsApp bitee booda, tajaajiloonni gurguddoon hedduun gama WhatsApptti dabalamuudhaan WhatsAppn akka jaalatamu tahee jira. Gara Telegramitti yoo as deebine immoo haala salphaa fi saffisan waan tajaajila kennuuf namoota heddu biratti jaalatama.
WhatsApp fi Telegramn wantoota gurguddoo heddu kan isaan wal fakkeessanii fi gar gar isaan godhan qabu. Mee wantoota isaan adda godhan muraasa akka armaan gadii kanatti haa ilaalluu
WhatsApp Maaltu adda godha?
Bilbila viidiyoo qeenxee fi gareetiin: Bara 2016tti tajaajilli bilbila viidiyoo qeenxee fi garee gara WhatsApptti dabalame. Bara 2016 sitti tajaajilichi maamiltoota WhatsApp hundaaf tajaajila kennaa jira. Gareedhaan hamma baayina nama 32 hirmaachisuu kan danda’u yoo tahu, namoonni hedduunis WhatsApp tajaajila kana jalqabuu isaaf gammadoo akka tahan dubbatu.
Tajaajila odeeffanoolee gaggabaaboo/status and story/: Tajaajilli kun walgahii f8 irratti kan ifoome yoo tahu, tajaajila maammiltoonni yookiin itti fayyadamtoonni isaanii ergaa yookiin yaada isaanii sa’aa 24 keessatti akka ibsataniif tajaajiluudha.
WhatsApp Hojii/Business WhatsApp: Bara darbe keessaadha WhatsAppn tajaajila kana kennuu kan eegale. Tajaajila hojii kanaaf kan ooluu WhatsAppn app haaraa WhatsApp Business jedhamu hojjatee jira. Dhaabileen hojii sadarkaa gadi aanaa irraa eegalee hamma olaanootti Maamiltoota isaanii bifa ergaalee barreeffamaan akka wal qunnamaniif haala mijataa uumee jira. Kana malees, too’annaa fi qunnamtii dhaabbanni tokko maamiltoota isaanii wajjiin qaban akka mijatu godhee jira.
Hidhoota shakkaman too’achuu/suspicious link: tajaajilli biraa fi namoota hedduun jaalatame keessaa tokko kan tahe, dandeettii whatsAppn hidhoota hamoo tahan too’achuuf qabuudha. Kana jechuun hidhoota vaayiresii/qinqanii fi odeeffannoolee kijibaa daddabarsuuf tajaajilan itti fayyadamtoota isaa beeksisuuti.
Kafaltii WhatsApp: Kafaltiin WhatsApp yoo jedhu, tajaajila itti fayyadamtoonni qajeelumatti karaa WhatsAppn lakkofsa herreegaa baankii isaanii irraa kafaltii gara garaa ittiin raawwataniidha.
Gulaallii barreeffamaa: Gulaalliin barreeffamaa tajaajila ergaalee nuti gama WhatsAppn barreesinu akka barbaannetti furdisuu/bold yookiin qallisuu/italic nu dandeessisuudha.
Telegram Maaltu adda godha?
Waliindubbii icciitii/secret chat/: Telegram keessatti nama wajjiin haasoftu wajjiin waliin dubbii icciitii raawwachuu ni dandeessa. Kanas ergaaleen nama lama giddutti daddarbu turtii murtaaye keessatti akka badu gochuudhaan ergaa icciitii haasawuun ni danda’ama.
Faayila hammaan gurguddaa daddabarsuu: telegram irratti faaayila hamma 1.5GB tahu gara fedhii keetti erguu dandeessa. Sababa kanaaf, namoonni faayiloota gurguddoo walii erguuf telegram ni filatu
Ergaan kee hin badu/cloud service/: Tajaajjilli biraa nama heddu birratti dhugumaan telegram akka jaalatumu godhe, ergaaleen ati telegram irratti namaaf barreesite kana hin banne tahuu fi intarneeta irrattikuufamanii kan taa’anii fi yeroo barbaadetti deebistee kan argattu tahuu isaati.
Bobboca dhuunfaa kee uumuu/themes/: Telegram wanti biraa kan adda isa godhaa halluu fi bobboca barbaadetti uumuu fi buufachuu dandeessa. Tajaajila kanas namni kamuu setting->chat setting->theme keessa deemuudhaan argachuu ni danda’a.
2FA/two factor authentication: kana jechuun nageenya/security telegram kee kan cimsuuf ooluudha. Namni fedhe bilbila kee qofa harkatti qabateef telegram kee keessa seenuu hin danda’u jechuudha yoo ati 2FA kee sirreesitee jiratteef
Instant View: instant view yoon jedhu, biloogii gara garaa bifa saffisa olaanaa fi daataa qussachuu danda’uun akka dubbistuuf kan si tajaajiluudha.
Mi’a gara garaa irraa fayyadamuu dandeessa: telegram barbaaddu koompiitara, feetu immoo moobaayila, feetu immoo taabileetii gara garaa irraa fayyadamuu dandeessa. Kana jechuun telegram fayyadamuuf yeroo hundaa app isaa playstore ykn itunes irraa buufachuun si hin barbaachisu jechuudha.
Chaanaalotaa fi gareewwan: tajaajilli biro kan telegram adda isa godhu chaanaalotaa fi gareewwan gurguddoo heddu uumuu dandeessa. Chaanaalii gaafa jedhu, akkuma fuula/page/ facebook dhaa maamiltoota heddu iratti horachuun kan danda’amuudha.
Bot: botn sagantaa koompiitaraa tajaajila gara garaa raawwachuuf ooluudha. Fakkeenyaaf gmailbot gargaaramuudhaan emai/ergaalee gamaa gmail keessanii ergaman dubbisuu, balleessuu, barreessuu fi kkf raawwachuu dandeessu telegram keessa taa’uudhaan.
Ergaalee ergaman gulaaluu: nama tokkoof telegram irratti yoo ergaa ergitee jirta yoo tahe, ergaa ergame sana irra deebiidhaan gulaaluu dandeessa.
Kafaltiiwwan raawwachuuf: kafaltiiwwan gara garaa telegram irratti raawwachuu dandeessa. Kafaltiiwwan gara garaa raawwachuun alatti, kafaltiiwwan sif kafalamanis raawwachuuf ni dandeessa.
Telegramin wantoota hedduun WhatsApp caala
Telegram wantootaa fi faayidaalee hedduun WhatsApp caala. Garuu immoo WhatsApp itti fayyadamtoota heddu qabaachuudhaan ni caala.
Viidiyoo garee ni qaba
Itti fayyadamtoota heddu qaba
Ergaalee icciitiin dabarsa
Hojiif ni tajaajila
Faayila hammaan guddaa hin dabarsitu
Qabiyyee akka telegram heddu hin qabu
Ergaalee badan deebistee hin argattu
Facebook dhaan too’atama
Akka walii galatti WhatsApp dhaaf qabxii 4 kennee jira. Sababni isaa nageenya itti fayyadamtoota isaa haala barbaadamuun hin eegu waan taheef.
Tajaajiloota heddu kenna
Faayiloota hammaan gurguddoo tahan daddabarsita
Iddoo heddu irraa fayyadamta
Ergaalee kee hin badu
Nageenyummaaf ni filatama
Bilbila viidiyoo hin qabu
Itti fayyadamaa xiqqoo qaba
Telegram dhaaf qabxii shan kenna. Tajaajiloota barbaachisoo tahan heddu qabaachuu fi nageenya itti fayyadamtoota isaa haala barbaadamuun waan eeguuf qabxii shan kenneefii jira
Waliin madaalliin maxxansa kana keessatti whatsapp fi telegram giddutti uumne kun akkam isinitti tolee? Yaada keessan nuuf barreessaa. Maxxansa kanas share gochuu hin dagatinaa. Quufni manaa isin hin bahin. Galatoomaa!!s
Creativity, Lifestyle November 23, 2018
Secondii 1tti maal gochuu dandeessa?